Dhulka (Af-Ingiriis: earth, Af-Carabi: أرض) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay. Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga. Dhulku waa meereha kaliya ee nolol ka jirto dhamaan meereyaasha aan naqaano. Waxa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 bilyan oo sanno. Dhulka isku-wareegiisa (Circumference) waa 40,007.86 km marka laga xisaabayo dhul badheha, sidoo kale baaxada guud ee oogada dhulku waa 510,072,000 km2 - taas oo ka kooban 148,940,000 km2 dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta 29.2 %; iyo 361,132,000 km2 biyo iyo bad ah, taas oo u dhiganta 70.8 % Muga dhulku waa 1.08321 ×10 12 km3 halka cufka meeraha dhulku yahay 5.97219 ×10 24 kg. Sidoo kale, miisaanka cuf ee dhulku waa 5.515 g/cm3, halka cufisjiidadka dhul badhehu yahay 9.780327 m/s2 taas oo u dhiganta 0.99732 g. Cadaadiska dunidan waa 101.325 kPa (MSL). Heerkulka oogada sare ee dhulku waa meel dhexaad taas oo ah mida taageertay in nolol ka jirto meerehan. Kulka iyo qaboowga dhulku wuu kala duwan yahay ayadoo Cidhifyada (polars) oogu heerkul hooseeyo taas ka dhigtey qaboow badan, laakiin meelaha ku beegan dhul badheha ayaa ugu heerkul sareeya dunida. Guud ahaan, heerkulka dunidu marka ugu hooseeyo wuxuu gaadhaa 184 K ama −89.2 °C, dhex-dhexaad markuu yahay heerkulku waa 15 °C ama 288 K, marka uu ugu sareeyo kuleeylku wuxuu gaadhaa 56.7 °C ama 330 K.
Muuqaalka guud ee dhulka sida uu ku sawiray dayaxgameed Suomi NPP
Dayax (ingiriis: Moon) waa aduunyo yar oo ku wareegta Meere ama wax ka ween dayaxa. Ugu yaraan, meere kasta wuxuu leeyahay hal dayax ama in ka badan. Dayaxu waa duni yar oo ka samaysan dhagaxaan, kuna wareegta dhulka, taas oo leh dherer dhan rubuc gacanka dhulka. Dayaxa dhulku waa kan ugu weeyn dhamaan dayaxyada meereyaasha Bahda Midaysay Qoraxdu laba odhan karo wuxuu ka wayn yahay meereyaasha yaryar qaarkood. Cufis-jiidadka u dhexeeya dhulka iyo dayaxa ayaa keena mowjadaha badaha, taas mi la mid ah ayaa keentay isku-xidhnaanshaha labadooda. Dayaxa oo ku socda xawaare dhan 1.022 kilomitir ilbiriqsigiiba, ayaa waxay ku qaadataa 27 maalmood, 7 saacadood iyo 43 daqiiqo in uu hal mar ku wareego dhulka. Dhinaca kale, isku wareega dayaxu (circumference) waa 10, 921 km; cufkiisuna waa 2.1958 ×
Mohandas Karamchand Gandhi (/ndi ˈɡæn-/; Af-Hindi: [ˈmoːɦənd̪aːs ˈkərəmtʃənd̪ ˈɡaːnd̪ʱi] ( dhageeyso); 2 Oktoober 1869 – 30 January 1948) wuxuu ahaa hogaamiye xisbi u dhaqdhaqaaqa xoriyada iyo madaxbanaanida wadanka Hindiya. Karmishaan Gandi oo lagu naanayso mahatma gandi (oo ay macneheedu tahay kii naftiisu aadka u waynayd am naftiisu muqadaska hayd)waxa uu dhashay (2 oktoobar 1869-30 janaayo 1948.)
waa aabaha hindiyada iminka jirta waxa uu ku dhashay halka lagu magacaaboboorbandar.oo katirsan gobolka.gojaraat.waxa uu ka dhashay caailad Siyaasadda lug aad u dheer kulahayd xiligaas.halkaas oo awoowgii kasoo shaqeeyay aabihiina uga danbeeyay raisal wasaaraha meesha uu ku dhasahy ee.boor bandar oo ah ama ahyd xiligaasi imaarad madax banaan.waxa kale oo ay lahayd caailada gaandi ganacsi aad u balaadhan oo macruuf ahaa xiligaas.waxa uu guursaday markii uu cimrigiisu ahaa 13 sano kaliya.waxaanuu dhalay afar caruura. gaandi waxa uu u safray wadanka ingiriiska sanadii 1882 si uu usoobarto qaanuunka.bilihii hore ee uu landhay ku qaatay waxa uu soomaray xaalad aad u adag. gaandi waxa uu markii uu gaadhay landan isku dayay sidii uu ula qabsan lahaa ingiriiska am uu u noqonlahaa nin ingiriisa laakiin taasi uma suurto galin oo way ku adkaatay waanuu laqabsan waayay. kadib wacxa uu ogaaday in aanay kahoray in uu siadag oo dhibleh u shaeeyo mooyee waxkale.gaar ahaan xaaladiisa dhaqaale oo xumaatay kadib markii uu gaadhay london. waxa uu bilaabay in uu qaanuunka barto.oo uu u turjunto qoraalada si deeqaysa ma ku haboon caqliga shacabkiisa. kadib waxa bilaabantay in qofnimada gandi ay soo shaacbaxdo. gaandi waxa uu hindiya ku noqday sanadii.1890. kadib markii uu helay shahaado jaamacdeed u ogolaanaysa in uu ku shaqaysto looyarnimo.lakiinwaxa lasoo gudboonaaday dhibaatooyin aad u farabadan oo kabilaabmatay dhimashada hooyadii.iyo isaga oo ogaaday in looyarnimadu ay tahay dariiqo aan isaga guul u keenayan.kadib gandi waxa uu u safray wadanka koonfur afrika.oo ay markaas ka jirtay midab kalsooc aad u xumi. Gaandhi waxa uu aasaasay waxa maanta loo yaqaano iska caabinta ama muqaawmada.nabadaysan ee aan rabshadaha lahayn.amaba waxa looyaqaano (sanyaraha) oo ah guruub mabdayo ah oo ku dhisan aasas dhaqaale iyo mid diimeed iyo mid siyaasadeed oo markeliya isla jaan qaada.gogol dhigna waxa u ah geesinimo adkaysi iyo rabshad la aan.waxaanay hadaf ka dhiganaysay fakradaa gaandi burinta isticmaarka iyo guuldarao gaadhsiinta qabsadayaasha iyo waliba sidii dareenka dadka reer hindiya loo kicinlahaa.
Qaarada Afrika waa qaarad dhacda badhtamaha Dhulka.
Last edited on 14 Sebteembar 2017, at 15:51